ငယ်ဘဝက ချစ်စရာ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးများကို ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအား အလွမ်းပြေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မင်းသားချောလေး သာထက်ဉာဏ်ဇော် – Cele Cupid
ငယ်ဘဝက ချစ်စရာ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးများကို ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအား အလွမ်းပြေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မင်းသားချောလေး သာထက်ဉာဏ်ဇော်
EverBest M | June 17, 2021 | Celebrity | No Comments
MRTV –4ကနေ ပြသတဲ့ “ ၉ ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲ ထဲမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ မင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ သာထက်ဉာဏ်ဇော် က တော့ မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ အသည်း စွဲ မင်းသား တစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် … . ။ သာထက်ဉာဏ်ဇော်ဟာဆိုရင် နောက်ထက် မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး မှာ ဒိုက်ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ရာမှာလည်း အထူးအောင်မြင် ခဲ့တဲ့အပြင်ပရိတ်သတ် အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက် ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … . ။
ဒိုက် ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာ နဲ့ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့ အတွက် ပရိသတ်တွေ အရမ်းကို အားပေးကြမ်းနေတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် … . ။ သာထက်ဉာဏ်ဇော် ဟာဆိုရင် မိခင်နဲ့ ညီဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော် … . ။ သာထက်ဉာဏ်ဇော်က လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေမှာ လည်းပြည်သူလူထုနဲ့ အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အပြင် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာကနေလည်း Speak Out လုပ်ပေးနေတာကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်နော် … . ။ သာထက်ဉာဏ်ဇော်က သူ့ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကို ဆိုရင်လည်း သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ ကနေတစ်ဆင့် ပရိတ်သတ်တွေကို ရင်ဖွင့်လေ့ရှိပါသေးတယ်နော် … . ။
ဒီတစ်ခါမှာ ဆိုရင်လည်း သာထက်ဉာဏ်ဇော် က သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝ ပုံရိပ်လေးတွေကို လည်း ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို အလွမ်းပြေ ထုတ်ပြလာ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … . ။ ငယ်စဉ်ကတည်းကအနုပညာကို ဝါသနာပါတဲ့ သာထက်ဉာဏ်ဇော်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်လေးတွေ ဟာဆိုရင်လည်း အရမ်းကိုချစ်စရာ ကောင်းလွန်းပါတယ်နော် … . ။ သာထက်ဉာဏ်ဇော်ရဲ့ ငယ်ဘဝ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေ ကို ချစ်ပရိတ်သတ် ကြီးအား အခုလိုပဲ တစ်ဆင့်ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော် … . ။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအား အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် … . ။
photo credit : Thar Htet Nyan Zaw facebook acc
MRTV –4ကေန ျပသတဲ့ “ ၉ ” ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္းတြဲ ထဲမွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ မင္းသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ သာထက္ဉာဏ္ေဇာ္ က ေတာ့ မိန္းကေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အသည္း စြဲ မင္းသား တစ္လက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ … . ။ သာထက္ဉာဏ္ေဇာ္ဟာဆိုရင္ ေနာက္ထက္ မမွီဝဲနဲ႔ကင္းေအာင္ေန ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေလး မွာ ဒိုက္ဆိုတဲ့ ကာရိုက္တာနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့ရာမွာလည္း အထူးေအာင္ျမင္ ခဲ့တဲ့အျပင္ပရိတ္သတ္ အားေပးမႈကို တစ္ခဲနက္ ရရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ … . ။
ဒိုက္ ဆိုတဲ့ ကာရိုက္တာ နဲ႔ ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္တဲ့ အတြက္ ပရိသတ္ေတြ အရမ္းကို အားေပးၾကမ္းေနတဲ့ ဇာတ္ကားေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ … . ။ သာထက္ဉာဏ္ေဇာ္ ဟာဆိုရင္ မိခင္နဲ႔ ညီျဖစ္သူကို ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ … . ။ သာထက္ဉာဏ္ေဇာ္က လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေန ေတြမွာ လည္းျပည္သူလူထုနဲ႔ အတူ တစ္သားတည္း ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အျပင္ သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာကေနလည္း Speak Out လုပ္ေပးေနတာကိုလည္း ပရိတ္သတ္ေတြ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါေသးတယ္ေနာ္ … . ။ သာထက္ဉာဏ္ေဇာ္က သူ႔ရဲ့ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ေတြကို ဆိုရင္လည္း သူရဲ့လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ ကေနတစ္ဆင့္ ပရိတ္သတ္ေတြကို ရင္ဖြင့္ေလ့ရွိပါေသးတယ္ေနာ္ … . ။
ဒီတစ္ခါမွာ ဆိုရင္လည္း သာထက္ဉာဏ္ေဇာ္ က သူ႔ရဲ့ငယ္ဘဝ ပုံရိပ္ေလးေတြကို လည္း ခ်စ္တဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးကို အလြမ္းေၿပ ထုတ္ျပလာ ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ … . ။ ငယ္စဥ္ကတည္းကအႏုပညာကို ဝါသနာပါတဲ့ သာထက္ဉာဏ္ေဇာ္ရဲ့ ငယ္ဘဝပုံရိပ္ေလးေတြ ဟာဆိုရင္လည္း အရမ္းကိုခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္းပါတယ္ေနာ္ … . ။ သာထက္ဉာဏ္ေဇာ္ရဲ့ ငယ္ဘဝ အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြ ကို ခ်စ္ပရိတ္သတ္ ႀကီးအား အခုလိုပဲ တစ္ဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္ … . ။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးအား အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ … . ။
တင်းကိတ်နေတဲ့ အောက်ပိုင်းအလှလေးကို အပီအပြင်လှုပ်ခါထားပြီး ပုရိသတွေကို ရင်ခုန်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ရင်ခုန်သံတွေ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားအောင် မိုက်လွန်းနေ တဲ့ မော်ဒယ် ရွှေစင် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
လှပလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားလေးပေါ်မှာ တက်တူးထိုးနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ လေး နဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး ရဲ့ TIK TOK ဗီဒီယိုလေး